Somaliland Sinaba Ugama Badbaadi Karto Isbedel Ka Geeska Afrika Ka Socda Balse Waa Inay Itaalkeeda La Jaan Qaadaa – somalilandtoday.com
Somaliland Sinaba Ugama Badbaadi Karto Isbedel Ka Geeska Afrika Ka Socda Balse Waa Inay Itaalkeeda La Jaan Qaadaa
Marka hore waa inaynu is weydiinnaa isbedel ka geeska Afrika ka socdaa waa maxay, yaa wada, goormuu bilawday, goormuu dhammaan ayaa, muxuu ka koobanyey, (challenges) ka hor iman ayaa waa ku wee iyo wax yaal a kaloo badan. Waxaa Igu kelifay inaan Mar kale fartayda screen ka saaro oon Maqaalkan kooban ku baraarujiyo walaalayga reer Somaliland ee qabyaaladda MADAX martay. Waxaan saaka akhriyey inan yar oo nuunuu ka ah siyaasadda laakiin dadaalay kol hadduu wax qorayo oo yidhi Madaxweyne Muse Biixi waa ka qudhee ka badbaadiyey Somaliland inuu isbedel ka geeska Afrika wax ka sameeyo. OK. Horta isbedel ku imikuu buu bilawmay durbana Kenya iyo South Sudan
iyo Masar Siyaasad ahaan buu gaadhay laakiin wuxuu ruxay Eritrea, Djibouti, Somalia, iyo Somaliland. Isbedel ku Ethiopia waa mid dimocracy ah oo Siyaasad iyo dhaqaale iyo mujtamac ahaan ba furfurraya Geeska Afrika oo uu horseed ka yahay Dr. ABBEY AHMED. Muddo yar ka hor buu bilawday laakiin xawli aan libiwsanayn buu kub socdaa, durbana shaqooyinkii baaxad leh ayuu ka bilaabay mandaqadda dhul celin aan hore loogu riyoon buu Eritrea uu siiyey. Wuxuu u Soo jeestay dhinicii oromada iyo Somalida oo muddo Xukuumaddii Tekraygu isku diraysay labada qoomiyadood ee midna Ethiopia ugu dadka badantay midna ugu dhulka weyntay ee labauba dulmanaa kumaankun sano. Isbedelku hadduu Somaliland taabtay waana bilaw oo ismaamulkii Dawlad degaanka Somalida kililka shannaad Dawlad dii loo samayn lahaa lama gaadhin ee MADAXWEYNAHA yar ee kursigii inay I lay u dhiibay jar uun baa looga talaabsaday ee kuwa la bedelayuu ka mid yahay. Halkaa dagaal baa ku soo jira Somaliland samayn doona dhinac siyaasadeed dhaqaale iyo nabad gelyoba. Muse Biixi wuu ku mahad sanyey arinkii uu ka dhawaajiyey laakiin arinta Somaliland iyo Xukuumadda Ethiopia intaa way ka gun dheertay, waxaa meesha yaal xidhiidhkii ka dhaxayn jiray Xukuumaddii SIILAANYO iyo Xukuumaddii Tikrayga noocuu ahaa iyo sida Muse Biixi iyo Dr Abby Ahmed ay oo do dhacameed u kala Guri doonaa. Iyo Dhinaca dhaqaalaha iyo nabad gelyada oo ku xidhan iska hor immaad ka liyuu police ka iyo ciidamada Federal ka intuu qaadan doono. Arinta ugu darani waa markuu Isbedelku u gudo Dawlad degaanka Tikrayga oo iyagu durba geeso yeeshay rabana inay Dr Abby Ahmed ka Takhalusaan.
Ninkaa yaree degdegayey maqaalkiisa uu leeyahay Somaliland Muse Biixi wuu ka badbaadiyey isbedel ka geeska ka socda, horta waa saadaal wacan ee HA SAMAATOO HA LA HELO laakiin weli far kama qodna isbedel ka geeska Afrika ee Abby Ahmed wado